Humnaa fi Kijibni Furmaata Rakkoo Siyaasaa hin Tahu -
Haalli Oromiyaa yeroo ammaa, duula jaarraa 19ffaa ummata Oromoo fi Oromiyaa irratti gaggeessameen wal fakkaata. Duulli jaarraa 19ffaa, ummata Oromoo waan hunda dhabsiise. Akeekaa fi kaayyoon humnaan jaarraa 19ffaa keessa raggaafame ummata Oromoo biyyaa fi qabeenya dhabsiise. Of lagatuun eenyummaa alagaa akka maxxanfatuuf dirqee, Oromummaa daandii dhabamaa qabsiise. Aadaa isaa boonsaa fi sirna bulchiinsaa dimokraatawaa dhabamsiisee sirna cunqursaa fi saaminsaa bakka buuse. Duulli jaarraa 21ffaa kana keessatti ummata Oromoo irratti Wayyaaneen gaggeeffamaa jirus kana irraa addummaa hin qabu. Mootummaan Wayyaanees ummata Oromoo jilbeenfachiisuun ol aantummaa ofii irratti dagaagsuun, qabeenya isaa saamuu fi booji’uun abbummaa irratti qabaatee saamaa jiraatuun akeeka isaa ti.
#OromoProtests – Mass Protests, February 27, 2016